Kismaayo News » Masaajid dhiirigalinaya Jimicsiga
Masaajid dhiirigalinaya Jimicsiga
Kn: Masaajid ku yaalada dalka Turkiga ayaa bilaabay inuu dadka ku soo tukada ku dhiiri galinyo jimicsiga jirka. Magaalada Kutahya ayaa xiliga dadku ka faaruqo salaadda, qofkii firaaqo haya ee aan meel u degdegsanayn ayaa dhalinyaro barata culuumta jimicsiga iyo isboortiga waxay siiyaan xiisad jimicsi.
Ayadoo la ogyahay in tukushada salaadda laf ahaanteedu ay tahay jimicsi ayaa hadana masaajid kani ku yaala magaalada Kutahya ee dalka Turkigu uu furay bog cusub oo lagu dhiiri galinaayo dadka ku nool magaalooyinka ee aan samaynin dhaqdhaqaaq badan si kor loogu qaado caafimaad kooda.
Turkiga oo ah dawlad qadiim ah, isla mar ahaantaana hogaaminayay dawladdii ugu danbaysay ee Islaami ah ayaa ilbaxnimada caalamka ka jirta wax badan ku soo kordhisay xiligii ay hormuudka ahaayeen, waxaana muuqata dib u curushada afkaaraha iyo ra’yiga wax ku oolka ah ee ay ku soo kordhinayaan guud ahaan caalamka, gaar ahaanna dalalka Islaamka.
Fikirkan uu hindisay masaajidka ku yaala Turkigu wuxuu waxtar u yeelanayaa dadka ku nool dalalka khaliijka iyo Bakistan oo dadka intooda badani ay la dhimanayaan buuraan xad dhaaf ah.